iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာ ၁၀ ခု | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Cristina Torres နေရာချထားပုံ | | အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ
iPhone ကမ္ဘာကြီးမှာကစားနည်းတွေဟာပိုအရေးကြီးလာတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်စမတ်ဖုန်းကဏ္intoတွင်မည်သို့စတင်မည်ကိုလေ့လာနေသည့်ဂန္ထဝင်ဗွီဒီယိုဂိမ်းကုမ္ပဏီအနည်းငယ်သည်လက်ရှိကဏ္thatတွင်လိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်အတူပါ ၀ င်နေသည်။ App Store မှာကမ်းလှမ်းမှုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရပေမယ့်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့နည်းဗျူဟာဂိမ်းကဏ္sectorမှပါ။ ဒီနေ့သူတို့ပြသထားတဲ့အတွက်နောက်လာမည့်အကြောင်းပြောဆိုတော့မှာပါ။ ဖြစ်ကောင်းဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာ ၁၀ ခု။
အောက်ပါစာရင်းတွင်သင်တွေ့မြင်မည့်သူအချို့မှာသင်သိရှိပြီးသားများဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်ဒေါင်းလုပ်အများဆုံးစာရင်းမှဖြစ်သည်။ အခြားသူများကမူသင့်အတွက်သိပ်အဆင်မပြေနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများကို၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အားပေးခံရခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးစျေးကွက်တွင်စျေးကွက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသည်။ App Store မှ iPhone အတွက်မဟာဗျူဟာဂိမ်း။ အကယ်၍ သင်၏စာရင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်လိုပါက၊ ထိုစာရင်းနှင့်အတူပါ ၀ င်နိုင်သောအောက်ပါအချက်များကိုသတိပြုပါ App Store ရှိအကောင်းဆုံးဂိမ်းများ.
1 iPhone အတွက်နည်းဗျူဟာဂိမ်း
1.1 ဆောင်း ဦး ရာသီမင်းဆက်
1.2 ခင့်နိုင်ငံတော် Rush Frontiers
1.4 ကွဲကွဲပြားပြား 2
1.7 အပင် vs. ဖုတ်ကောင် 2
1.8 ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး 2
1.10 ဘေးဥပဒ် Inc က
ဆောင်း ဦး ရာသီမင်းဆက်
အကယ်၍ သင်သည်မြို့များတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်သည့်ဂိမ်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုများနှင့်သင်ရင်ဆိုင်ရလျှင်သင်ကြိုးစားရမည်။ တရုတ်မင်းဆက်များအပေါ်အခြေခံပြီး၊ သင်သည်လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်ကြီးထွားလာနိုင်ရုံသာမကအင်အားအကြီးဆုံးအင်ပါယာတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရုံသာမကသင်၏ရန်သူများနှင့်လည်းရင်ဆိုင်နိုင်သည်။ သံတမန်ရေး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသတ်မှတ်.
ခင့်နိုင်ငံတော် Rush Frontiers
သင်တစ်ခါမှမကြိုးစားဖူးပါက၎င်းကိုဖော်ပြရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာမှတ်မိခြင်းဖြစ်သည် မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဤကိစ္စတွင်အခြေအနေများ၊ ရန်သူများနှင့်အထူးသဖြင့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော်လည်းတိုက်ပွဲများအားပိုမိုကာတွန်းကားစေရန်အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်အဆင့်ဟာအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။ ပျင်းဖို့ခက်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲကတစ်ခုရှိပါက iPhone အတွက်နည်းဗျူဟာ ၁၀ ခု ယနေ့အာရုံကိုဆွဲယူသောအမှန်တရားမှာ၎င်းသည်ရွေးချယ်ထားသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူသိများသောအရာအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ပြီးယင်း၏ရိုးရှင်းသောပဟေofိ၏ထိတွေ့မှုနှင့်အတူရိုးရှင်းသောပဟေofိများဖြင့်လူများစွာသည်ဂန္ထဝင်ထက်ကျော်လွန်သောရှုထောင့်အသစ်များကိုကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။
သူတို့ပြောကြတယ် ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းများကောင်းသောဖူးဘူး, ဒါပေမယ့်စည်းမျဉ်းကိုအတည်ပြုတဲ့ခြွင်းချက်အမြဲရှိပါတယ်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်မူရင်းပုံပြင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပေမယ့်ဂရပ်ဖစ်၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ကအဟောင်းနှင့်ပရိသတ်အသစ်များကိုဖမ်းယူဖို့ခြောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အချို့သောအသက်အရွယ်မှာသာအကြံပြုသင့်ကြောင်းအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခု။ သငျသညျရိုက်ကူး, action ကိုဂိမ်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်သင်ပြီးပြည့်စုံသောဇာတ်လမ်းလက်နက်များရှိရာတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လျှင်, သင်ကသံသယမရှိဘဲကြိုးစားရန်ရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါဟာဘတ်ဂျက်အားလုံးနဲ့မသင့်တော်ပါဘူး၊ အနည်းဆုံး App Store မှာသုံးလို့မရပါဘူး။
သင်ထင်လျှင် ဥပဒေတွေကပျင်းစရာကောင်းတယ်အမှုကိစ္စများကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းအများဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အစ မှစတင်၍ ကျော်ကြားမှုနှင့်ကံကြမ္မာကိုရရှိသောရှေ့နေတစ် ဦး အဖြစ်နေထိုင်ရန်အသင့်ရှိပါ။ ရုံးခန်းကိုအလှဆင်ခြင်း၊ ကိစ္စရပ်အသစ်များအတွက်လောင်းခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ကွဲပြားခြားနားသောလက်နက်များဖြင့်သင့်အားကာကွယ်ခြင်းသည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ကြိုးစားရန်ပျက်ကွက်သွားပါသလား?
အပင် vs. ဖုတ်ကောင် 2
ငါသည်ဤအထူးသဖြင့်အမှု၌များစွာသောရှိပါတယ်ထင်ပါတယ် အက္ခရာများ။ အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်လူသိအများဆုံးနှင့်အများဆုံး download လုပ်ခံရဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ မကြာခဏ update လုပ်ခြင်းနှင့်အခမဲ့ download ရယူခြင်းပရိုမိုးရှင်းများသည်၎င်းကိုဆက်လက်မြှင့်တင်ရန်သဘောတွင်များစွာလုပ်ဆောင်သည်။
တနည်းကား၊ ယဉ်ကျေးမှုများဤကိစ္စတွင်ခေါင်းစဉ်သည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်သည်နယ်ပယ်အားလုံးတွင်အောင်မြင်မှုရရန်ဖြစ်သည်။ သံတမန်ရေးအရသင်သိပ္ပံ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေးနှင့်စစ်ရေးအနုပညာများတွင်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်ရမည်။
ဤကိစ္စတွင်အတွက် စင်မြင့်ညီတူညီမျှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်အဘယျသို့ပွုရပါမည်ပေမယ့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မှာနျူကလီးယားလွှမ်းမိုးမှုကိုရှာတိကျစွာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်၎င်း၏ရိုးရှင်းသောအယူအဆကိုအံ့အားသင့်စေသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်သုံးစွဲသူများသည်ပိုမိုများပြားလာသည်။ အကယ်၍ သင်ကကမ္ဘာ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီခေါင်းစဉ်ကို download လုပ်ခြင်းဟာအများဆုံးအကြံပြုချင်တာပဲ။
ဘေးဥပဒ် Inc က
၎င်းသည်စိတ်ကူး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် တော်တော်ဆိုးပါတယ်အမှန်တရားကတော့ကမ္ဘာကြီးကိုပိုးမွှားတွေနဲ့ကူးစက်ခြင်းဟာ iPhone မှာအတော်လေးအောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ App Store ရဲ့အနည်းဆုံးစျေးနှုန်းနဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုတိတိကျကျပြောနိုင်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ » အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ » iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာ ၁၀ ခု
Plants vs Zombies2ကိုအဆင့်အသစ်များဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်သီးသန့် "Tinder" ကိုယူပါ